WOWOW tetezana lakozian'ny mpangaro vita amin'ny ranom-boasary - voan'ny nikela
Home / Fitaovana an-dakozia / Solon-trondro mameno rano / WOWOW Tetezana mixer an-dakozia an-dakozia - Nickel borosy
WOWOW Tetezana Kitchen Sink Mixer Tap - Nickel borosy
Ny sokitra dia vokatra namboarina hampiasaina isan'andro amin'ny fiainantsika, izay mety ho anay ny mampiasa rano. Anisany, ny sokitra hanasa vaventy no vokatra fahita indrindra. Ny lakozia boucet an-dakozia dia manana endrika tsy manam-paharoa, Safidio ity kasety ity mba hanoherana ny filanao aesthetic.
Tetezana milentika amin'ny savony
Azo antoka fa ny vokatra any an-dakozia ao anaty lakozia no ampiasinao isan'andro. Imbetsaka na dia. Ny savon-dranon'ny kirihitr'omby dia mety indrindra amin'ny paompy rano, misotro rano, na manadio ny lakozia. Izany no antony ahafahanao misafidy faucet an-dakozia am-pahakingana mba hifanaraka tsara amin'ny fanirianao. Tsy momba ny fomba lakozia ihany, fa indrindra momba ny fiasa sy ny fahaizany. Ny kirihitr'akanjozy any amin'ny lakozia misy ny WOWOW dia manolotra kirihitra misy lakozia miavaka izay mifanaraka amin'ny fanirianao aesthetic. Ny tendrony matevina retro miray tetika amin'ny firenena frantsay frantsay ao an-dakoozinao. Izany dia mampiavaka ny famolavolana anao. Ny tsipika matevina sy avo lenta dia manome ny lakozia anao amin'ny fikolokoloana kanto izay mila omena azy io amin'ny wow-factor.
Ny famaranana nikarakara fotsifotsy dia manome endrika tsara sy vidy amin'ny haingo amin'ny lakozia anao. Miaraka amin'ny famolavolana azy manokana, tena azo antoka fa iray amin'ireo karazana grèber milentika any an-dakozia. Ny mpamorona ny WOWOW dia mahafantatra ny fomba hamolavola faucets an-dakozia. Tsikaritrareo fa avy amin'ny zavatra rehetra. Ny faucaux an-dakozia an'ny WOWOW dia miavaka amin'ny faucet any an-dakozia hafa. Mahavariana ny mpamorona, izy ireo dia mahalala ny zavatra rehetra momba ny famolavolana an-dakozia, ary ny tena zava-dehibe dia ny tsy hanamaivan'izy ireo ny fiantraikan'ny boaty milentika ao an-dakozia ao amin'ny haingo an-dakozia. Resy lahatra izy ireo fa afaka mitondra tsy fitoviana amin'ny famolavolana any an-dakozia izy ireo, ary manao izay ho afany indrindra mba hahatratrarana izany wow-factor ao an-dakoinao io.
Rivotra vita amin'ny lakozia ergonomika
Ny fiononana dia ny zavatra rehetra. Rehefa mampiasa zaridaina lalamby lalandava isan'andro ianao isan'andro, dia mila drafitra ergonomika izay mora mitazona sy mifehy. Mihazakazaka mandeha ny tànana mba hifehezana mora ny fikorianan'ny rano ao anaty rano mafana sy mangatsiaka. Amin'izany fomba izany dia afaka afangaro ny mari-pana ny rano ianao. Ankoatr'izay, ny tsimoka avo be miolakolaka dia manome traikefa anti-splatter sy leak-maimaimpoana izay mahatonga ny lakozian'ny lakozian-kavoana mihoatra noho ny aina ampiasaina.
Ny fikorianan'ny rano ao amin'ny boaty fandriam-paharazana an-tsambo dia mihamalalaka ihany koa noho ny averiny Neoperl ABS aoter. Tsy ity fitaovana ity ihany no manolotra tsindry sasany amin'ny fikorianan'ny rano mba hamonjy rano. Aza atao ambanin-javatra fa afaka mamonjy rano mihoatra ny 50% amin'ny fitaovana ampiasainao ity. Azo antoka fa ho voamarikao amin'ny volanao ny volanao. Etsy andaniny, tsy miova ny zavatra iainanao amin'ny rano. Tsy ho hitanao mihitsy fa mampiasa rano kely kokoa ianao, indrindra raha avo ny tsindry amin'ny rano. Ary farany dia hanana rano mikoriana mafy ianao mba hahafahanao manadio mora kokoa ireo singa miaraka amin'ny fiaramanidina matanjaka, na inona na inona fomba ampiasainao amin'ny rano. Azonao atao ny manilika mora foana ny aoteran'ny ABS tsy misy fitaovana alaina hanesorana azy na madio na hisolo azy. Aza adino ny manadio ny aoterany matetika rehefa miangona eto ny rano miady. Tsy mila manala ny aoteranao ihany ianao hanadio azy matetika. Amboarinao haingana amin'ny rantsan-tànanao fotsiny dia azonao esorina tsotra sy mora daholo ny ambiny sarotra.
Rivotra vita amin'ny vy any an-dakozia vy
Ny mofomamy amin'ny lakozian-tsambo amin'ny tetezana dia namboarina avy amin'ny varahina izay mahatohitra ny harafesina ary manohitra ny hafanana avo. Vokatr'izany dia ny pokondraky ny lakozian-tsambo no namboarina haharitra mandritra ny taona maro. Tsy vitan'ny mpandray anjara amin'ny lakozian-dakozia fotsiny no vita amin'ny varahina matevina. Ny fifandraisana koa an'ny ½ santimetatra dia vita amin'ny varahina avo lenta. Tsikaritrareo fa mihazona ny faucet bozomain-tsambo eny an-tananao ianao. Noho ny lanjany dia azonao atao avy hatrany ny milaza fa tsy voatahiry ny fitaovana hanolorana anao ny sarobidy indrindra ahazoanao vola.
Ny velaran-dranon-drongony dia tsy manome fofona tsara any amin'ny lakozian-tsambokely misy vatosoa fotsiny ary miaro ny faucet amin'ny lakoziazinao. Noho ny fahatsapana kalitao dia manolotra anao traikefa manohitra ny mahavariana sy tsy fahatoranana. Ny marefo any amin'ny lakozian-kavoana misy anao dia tsy marefo amin'ny gorodona, ary azo tehirizina tsara amin'ny fotoana maharitra. Ny faran'ny velaran-tsolika vita dia manome anao tombontsoa ihany koa fa ny fanaovana pirinty ny rantsantanana dia tsy mijanona amin'ny faucet any an-dakozia mihitsy. Hanana ny zaridaina tetezana lakozia tsara tarehy sy madio ianao.
Sobaka vita amin'ny lakozia antampeta antitra
Ny akorandriaka amin'ny lakozian-tsambo an'ny WOWOW dia toa tafiotra an-dakozia antitra. Tsy misy na inona na inona an'io zotram-pasika an-tsambo io dia ampiharina ao amin'ny toerana ara-barotra maro toy ny trano fandraisam-bahiny ihany koa. Ny baoritra lakozian'ny lakozia namboarina ho fanehoana hatsarana mahazatra amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Ny faucine bozomainina an-tsambo dia manome flicker fatratra amin'ny firavaka an-tsokosoko taloha amin'ny haingon-trano ao an-dakozia. Manodidina ny 8 santimetatra ny haavon'ny tsangam-bavon'ny tetezana an-tsambo. Ity silhouette mioritsoritsaka lava ity dia tena nahasoa ny famolavolana azy. Groucte bozero any amin'ny lakozia misy korontana Noho ny fampiasana fitaovana vita amin'ny varahina avo lenta sy famaranana tsara dia mateza matevina ny tsangazo amin'ny lakozia. Miaraka amin'ny fomba fiasa vaovao amin'ny famokarana faucet an-dakozia, ny WOWOW dia mahafantatra ny fomba fitazonana ny vidiny ambany kely araka izay azo atao. Vokatr'izany, ny WOWOW dia afaka manolotra aminao ny sandany tsara indrindra amin'ny vola. Izahay dia resy lahatra momba ny salan'isa momba ny vidiny ary afaka manome anao antoka tsy miverina 90 andro tsy mihetsika. Raha mahita gripo tsara kokoa ianao amin'ny vidin-javatra mitovy, na boaty mandeha amin'ny lakozia mitovy amin'ny vidiny kely kokoa, hamerenay aminao izahay. Tsy misy fanontaniana nanontany, ary tsy misy olana. Matoky ny vokatra aminay izahay ary resy lahatra fa ianao koa dia.
Toy ny faucets an-dakozia WOWOW, ianao dia azo antoka fa haharitra mandritra ny 5 taona. WOWOW dia mihoatra ny fenitry ny indostria rehetra, ary manao toy izany koa amin'ny vanim-potoanan'i garantiana. Izahay dia manome antoka fa ny fantsom-by lakozian-tsambo milentika an-tsokosoko mandritry ny 5 taona farafahakeliny Tsy mila mitondra risika ianao fa hitranga. Raha ny fahasimbana eo amin'ny lakozian-tsambo anao dia mety hiteraka fahasimbana mandritra io vanim-potoana io, dia faly isika manolo azy amin'ny vaovao fa tsy misy olana. Io antoka io dia ny fanoloran-tenanay aminao.
Ny tombony azo avy amin'ny lakozian-tsambo milentika amin'ny boaty amin'ny fomba fohy.
• Manome wow-point any an-dakozia
• Ny fijerena retro antitra tokana
• Famolavolana arc lava lava
• vita amin'ny fitaovana varahina avo lenta
• Nodimandry natsipy mafy dia vita
SKU: 2311501 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Solon-trondro mameno rano Tags: Bridge, Nickel nopotehina, Tima tokana
20.47 X 6.97 X 2.8 santimetatra
Tsy misy sprayer amin'ny lafiny